Fikarohana momba ny firaisana Ted Butler dia novonoina tamin'ny kamiao iray, nanatrika ny fandevenana azy, lasa Fanahy Masina eto an-tany izay voavonjy avy amina vehivavy iray amin'ny fikarohana momba ny Tranomaizina - Fikambanana vaovao momba ny vatana
Mamono kamiao i Ted Butler
Tamin'ny fivoriana iray natao tamin'ny Febroary 10, 1964, a Ilay lehilahy antsoina hoe Ted Butler dia namakivaky. Betty Greene nanontany an'i Ted ny fomba nandehanany. Namaly i Ted:
“Niara-niasa tamin'ny vadiko tany Leeds, Angletera aho, ny sabotsy, ary niampita ny arabe aho ary talohan'ny nitenenanao an'i Jack Robinson dia nisy zavatra nahavoa ahy. Karazana kamio io izay heveriko fa tsy voafehiko intsony. Nahatonga ahy nifikitra tamin'ny rindrina io ary nivoaka aho. Vao nahatsiaro zavatra tonga nanatona ahy aho, ary izay ihany. Tampoka teo daholo ny zava-nitranga. Tsy tadidiko ny niaina fanaintainana. ”
Nanontany i Ms. Greene hoe: "Ahoana no nahitanao ny tenanao?"
Mijery ny vatany i Ted
"Eny", hoy ny navalin'i Ted, "Ny zavatra fantatro dia ny nahitako olona marobe izay nijoro teo amin'ny zavatra iray. Nijery ny vahoaka aho ary nahita olona nitovy tamiko! Tamin'ny voalohany, tsy fantatro fa izaho no izy. "
Nieritreritra aho hoe: "Kisendrasendra izany. Ny mpiara-mijery dia mitovy amin'ny ataoko. Mety ho ny rahalahy kambana "
Tsapako avy eo fa nitomany ny vadiko tany. Tsy nahatsapa izy fa nijoro teo anilany aho.
Nametraka ny vatako tao anaty fiara fitaterana marary izy ireo, ary niditra ny ramatoa ary nisy mpitsabo mpanampy. Niditra aho ary nipetraka niaraka tamin'ny vadiko ary toa tsy nahatsikaritra fa nipetraka teo aho. Avy eo dia tsapako tsikelikely izany tany amiko izany.
Nankany amin'ny hopitaly aho. Mazava ho azy, napetrak'izy ireo tao amin'ny trano fonenana aho. Tsy tiako mihitsy izany. Nivoaka haingana àry aho ary nody. Nisy ny vadin'i Miss Mitchell teo akaiky teo, niezaka nampionona azy. Heveriko fa izany no fotoana ratsy indrindra tamin'ilay lot.
Mamonjy ny fandevenana i Ted
Dia nisy ny fandevenana. Mazava ho azy, nanao izany aho. Nieritreritra ny tenako aho hoe: "Ity tebiteby ity sy ny fandaniana ho an'ny tsy misy, satria eto aho." Nieritreritra aho fa tena mahakasika tokoa izany, saingy tamin'izany fotoana izany dia toa somary adaladala toy izany avokoa izany, satria teo aho. Tsy nisy nahamarika izany.
Ilay parson taloha dia nijoro teo nanao recitation. Nieritreritra aho hoe: “Tokony ho fantany raha misy mahalala. Ka dia nandeha aho ary nijoro teo anilany, ary notohizako niaraka taminy kiho ny sisiko. Tsy naka fanamarihana mihitsy izy. Nanohy ny fanaony fotsiny izy.
Avy eo koa ireo mpandevina. Fantatro ny iray tamin'izy ireo, Tom Corbett taloha. Tranga iray izy, maro ny pint miaraka aminy ary mihomehy aho. Nofenoiny ny lavaka, ary ilay bloke hafa kosa nameno ilay vatam-paty taloha sy ny fasana. Nihevitra aho fa tsara izany ataonao. Tsy mijanona eto amin'ity faritra ity aho, ka nivoaka aho.
Mamakivaky ireo Tranon'ny City ao amin'ny City i Ted, ary ao izy no misy ny torolalan'ny Fanahy izay manampy ny Fanahy Masina eto an-tany
Tsy maintsy nihantona nanodidina ny tranoko nandritra ny herinandro maro aho tokony hieritreritra. Indray mandeha na indroa aho mandeha amin'ny trambo taloha. Tamin'ny voalohany dia karazana mifangaro daholo aho. Fa mba nihomehy koa aho indraindray. Raha fantatry ny orinasa fa hipetraka eto aho ary tsy mandoa ny saran-dalako, dia hiteny izy ireo.
Nanomboka nahatsapa aho fa ny olona rehetra mipetraka ao anatin'io kamiao io dia tsy mandoa ny saran-dalan'izy ireo koa. Ny iray amin'ireo resaka voalohany nataoko dia ny vehivavy nipetraka teo akaikiko. Noheveriko ho tsara tarehy be izy ary izany rehetra izany. Ary nanomboka resaka izy.
"Inona no ataonao aty?"
Nieritreritra aho hoe: ”Izany no fomba tsara hanokafana resaka.” Ka hoy aho hoe: "Inona no tianao holazaina eto? Mety ho eto toa ny toerana hafa ihany aho. ”
"Fantatro," hoy izy. “Saingy tokony hanao zavatra ianao, tsy tokony hiakatra sy hidina amin'ny kamisy sy bus fotsiny fa hampiasa saina ny vadinao. Tsy afaka manao zavatra toy izany ianao. ”
“Eny,” hoy aho. “Tena tsara ho anao izany rehetra izany. Fa ho aiza ianao amin'izay? "
Mazava ho azy, tsapako fa maty izy. Nieritreritra aho hoe: "Inona no ataony amin'ny mitovy amin'ny ahy?"
"Raha ny zava-misy," hoy izy, "dia efa niaka-nidina tamina kamiao sy bus aho, efa elaela izay. Saingy angamba mbola tsy nahatsikaritra ahy ianao raha tsy izao. Niandry fotoana hanandrana hanome tanana anao aho. ”
"Inona no azonao atao," hoy aho nanontany.
"Eny ary," hoy izy namaly, "tsy eritreretinao ve izao fa fotoana efa nialanao tamin'ireto fepetra ireto? Ny eritreritrao fotsiny no mitazona anao. Te-hanao mihoatra noho izany ianao, ary mihantona amin'ny tany. Tsy misy olona mahamarika anao. Inona no dikan'izany? "
"Eny, misy mahatsapa an'izany," hoy aho. “Marina fa tsy misy mijery izany. Fa hitako fa tsara kokoa noho ny karazana well-well, tsy manelingelina mihitsy. Na ahoana na ahoana, tsy misy zavatra hafa fantatro. ”
"Izany no fahadisoanao," hoy izy. "Ny toe-tsainao no mitazona anao eto. Raha te hamotsotra ny eritreritrao ianao ary hieritreritra ny zavatra eritreretina sy natiora ambony kokoa, dia hiala amin'izany rehetra izany ianao. Mazava ho azy, fantatro fa noho ny fomba nandalovanao, ny tampoka izany, ary ny fanombanana ny vibreran'ny vadinao sy ny reninao, ary ny iray na roa hafa mitazona anao. Saingy tokony hiala amin'izany rehetra izany ianao. Miaraka amiko ianao. "
Ny mpanampy an'i Ted dia mitondra azy any amin'ny tontolon'ny fanahy
"Eny, ho aiza isika?"
"Oay, hitondra anao aho. Aza matahotra. "
"Eny, handeha izahay amin'ny fiatoana manaraka?"
"Inona no tianao holazaina, mivoaha amin'ny fijanonana manaraka," hoy izy. ”Tsy ilaina ny miandry dia mivoaka amin'ny fijanonana manaraka. Afaka mivoaka isaky ny maniry izahay, raha vantany vao tapa-kevitra ianao. ”
"Tsy azoko izany."
"Tokony hahafantatra bebe kokoa ianao izao," hoy izy, "fa na dia afaka miditra ao anaty bus aza ianao ary mipetraka eo amin'ny bisy ary mijanona eo amin'ny fijanonana ary mizotra amin'ny toerana fakana sy izay rehetra izay dia tsy mila . Tsy mila manao izay ataon'ny hafa ianao. Tsy fahazarana fotsiny no anaovanao zavatra. Tokony hiala amin'ireo fahazarana ireo ianao ary hahatsapa ankehitriny fa tsy zava-dehibe ireo zavatra ireo, ary amin'ny eritreritra fotsiny dia afaka miala amin'ity toe-javatra ity ianao. ”
"Eny, tsy fantatro."
"Jereo," hoy izy, "Ity ny tanako. Mihazona ny tanako ianao, manakimpy ny masonao fotsiny ary manandrana tsy mieritreritra zavatra manokana manokana. Ataovy karazana banga fotsiny ny sainao. ”
Ka nanao araka ny nolazainy ahy aho. Somary mafy ilay izy hitako. Tsy fantatro hoe hafiriana no tokony ho fotoantsika talohan'ny nidinanay. Tsy maintsy nahatsiaro tena aho. Ny zavatra manaraka fantatro fa nipetraka tamin'ny seza sandry tena tsara nanoloana an'ity vehivavy ity tao amin'ny efitrano kely kely mahafinaritra aho. Tena tsara, tena tsara tarehy. Nisy karipetra tsara tamin'ny gorodona, ary fahatsapana hazavana sy hafanana mahafinaritra, izay noheveriko fa ny masoandro namirapiratra teo am-baravarankely. Ny zava-drehetra dia toa spick sy span. Napetraka tsara ny latabatra. Io dia toy ny hoe lasa nandeha nisotro dite atoandro aho. Nieritreritra aho hoe: "Aiza aho izao?"
"Hitako eto ianao," hoy izy. “Tsapanao fa ao amin'ny efitranoko kelikely ianao izao.”
"Oh," tena mahafinaritra anao izany. Tsy fantatro ny fiheveran'ny vadiko ahy hipetraka ao amin'ny tranon'ilay vehivavy hafahafa! "
"Ah," dia nihomehy izy. "Aza mieritreritra an'izany ankehitriny. Lavitra lavitra anao izany. Amin'izao fotoana izao dia hanana chat tsara sy kapoaka tsara tarehy, ary hanazava ny zavatra ho anao aho. "
"Tena mahafinaritra anao izany."
"Eny ary, eny an-dalana," hoy izy, "Tiako ho fantatrareo fa teto aho nandritra ny taona maro. Tonga tamin'ny faramparan'ny taona aho. "(1900)
"Eny," hoy izy. "Ary miaina miaraka amin'ny reniko aho."
"Oh, ianao ve?" Hoy aho. "Aiza ny reninao izao?"
"Mandeha miasa ve izy?"
Lasa any an-danitra ny ankizy maty
Nihomehy izy: “Heveriko fa afaka miantso azy io hoe miasa ianao, fa tsy mety amin'ny fomba taloha. Ny reniko dia vehivavy miasa mafy nandeha teto an-tany. Nahazatra nanasa izy taloha ary nanao zavatra foana. Mandeha amin'ny toerana itadiavany ankizy izy izao, satria tia ankizy foana izy. Ankizy kely maty tamin'ny fahazazany na fony izy mbola kely, ary manampy amin'ny fitaizan-tena sy hikarakara azy ireo izy. Tiany io asa io. Ho avy tsy ho ela izy. Ka hanana dite iray kaopy izahay. ”
Manana Tea of ​​Heaven ny Ted
Nieritreritra aho hoe: “Mampihomehy izany. Manontany tena aho raha hanandrana azy io. Rehefa nandeha tany amin'ny toeran'ny vadiko aho ary nisotro dite ry zareo dia nieritreritra aho fa te-kaopy eraka, saingy mazava ho azy fa tsy afaka naka ireo kaopy aho, ary heveriko fa tsy te ' Tsy nanandrana izany. ”
"Oh, ho avy ianao," hoy izy, "satria amin'ny tontolo hafa tanteraka ianao. Ao anatin'ny toe-javatra voajanaharinao ianao izao, ka izay rehetra manodidina anao dia ho voajanahary sy tena izy. Manana an'ity kaopy ity ianao, malala, ary hanandrana azy ianao. Izy io dia hanandrana mitovy amin'ny dite anananao eto an-tany.
Dia nanandrana izany aho ary dia izany.
"Eny, tsy tsara ve izany?"
“Eny,” hoy aho, “mahafinaritra be izany. Fa iza no nieritreritra ”Tsy afaka ny hihomehy aho–” Inona no ho eritreritry ny olona eto an-tany momba antsika hipetraka eto manana kaopy dite! Hieritreritra izy ireo fa adala izahay. ”
"Tsy takatry ny olona izany," hoy izy. "Eto, araka ny fomba itiavanao azy, ary rehefa mandroso ianao, dia hahita zavatra any ianao any amin'izay ilainao. Raha, raha vao tonga ianao dia mahatsapa fa ilaina ny manana izany na izany, dia omena izany. Fa zavatra tsy misy dikany izany raha tsy efa nanitsy ny tenanao ianao fa tsy mila ireo zavatra ireo ianao. Tsy manana dite na zavatra toy izany aho. Saingy satria ianao dia vahiny tao an-tranoko ary zatra tsikelikely amin'ny zavatra ianao dia nihevitra aho fa hanampy anao izany. "
“Tena tsara ho anao izany,” hoy aho. “Tsy tokony ho nandalo olana ianao.”
"Tsia," hoy izy. “Tsy misy olana. Ampahan'ny asako io. ”
Nolazain'i Ted fa Fanahy Fanahy any an-danitra izy
"Eny," hoy izy. "Ataoko ho fahazarana ny midina amin'ny tany raha afaka manampy olona toa anao izay Earthbound."
"Inona hoy ianao teo?"
“Eny, izany no naha-teo anao, malala malala. Nifamatotra tamin'ny tany ianao noho ny toe-tsainao sy ny eritreritrao. Tsy afaka namoaka ny tenanao ianao. Ary izany dia ampahany amin'ny asako, ny manampy ny olona hanafaka ny tenany amin'ny zavatra ara-nofo. Nandeha nitety sy nidina an'io kamiao io matetika aho niaraka tamin'ny olona satria efa nonina tao amin'io tanàna io aho taona maro lasa izay. Manao ny keliko aho. Olona an'arivony sy an'arivony maro no manao izany, fantatrao, ary iray amin'izy ireo aho. ”